Waa maxay sahannada la bixiyo? | Ebuno
Sidee ayey u shaqeeyaan sahannada la bixiyo?
Adiga tan akhriyay waxay u badan tahay inaad aragtay boggaga qaarkood oo bixiya sahanno lacag bixin ah oo aad ku sameyso internetka. Laakiin sidee ayay runtii u shaqaysaa? Sidee laguugu siiyaa inaad ka jawaabto su'aalaha fudud? Jawaabtu runtii way fududahay.
Kuwani waa shirkado doonaya macluumaad ku saabsan wax soo saarkooda, tartamayaasha iyo fikradaha la xiriira warshadaha ay ka shaqeeyaan. Shirkado badan ayaa diyaar u ah inay bixiyaan lacag aad u fiican macluumaadkan iyo mahadsanid inaad ka jawaabeyso sahan, waxaan kugu siinaynaa abaalmarin halkan Ebuno inaad uga noqon karto PayPal.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida sahannada laga bixiyo internetka shuqullada
Ayaa sameynaya sahaminta?
Annagu ma samaynayno baaritaannada nafteenna, laakiin shirkadaha sida CINT iyo P2Sample ayaa tan sameeya. Shirkadahaan waxaa loogu yeeraa "sampling survey" Shirkadaha gacanta ku haya habka iibinta ee udhaxeeya shirkadaha daneynaya sameynta sahan iyo helitaanka jawaabaha. Ka dib markay shirkad sida CINT oo kale ah ay samaysay sahan, waxay noo soo diraan macluumaadka si aan ugu tusno kuwa isticmaala. Markii sahanka laga jawaabo, CINT waxay na siisaa qadar yar oo qayb ka mid ah lacagtaas waxaa la siiyaa adeegsadayaashayada. Sidaa darteed annaga mas'uul kama nihin shirkadaha ay sahaminta sameynayaan iyo su'aalaha ku jira, laakiin waxaan bixinnaa oo keliya jawaabo.
Sahannada labixiyay laguuguma talinayo inaad lashaqeeyaan kaliya maxaa yeelay lacag badan kamahelaysid. laakiin waa hab fiican oo lagu helo xoogaa lacag ah oo dheeraad ah qadada / kafeega tusaale ahaan aadna ay caan ugu yihiin ardayda inay helaan dinaar dheeri ah oo jeebka ku jirta.
Wax yar oo ku saabsan CINT
CINT waa shirkad laga bilaabay Iswiidhan waana shirkad weyn oo wax soo saare ka ah halkaan Ebuno. Baadhitaannada CINT badanaa way fududahay oo dhakhso badan yihiin oo ay fududahay in la sameeyo. Nidaamyadeena iyo CINT-yadu way wada shaqeeyaan si loo helo sahan u dhigma astaantaada, taas oo looga baahan yahay sahan qaarkood.
Sideen ugu bilaabaa sahannada la bixiyo?
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad bilowdo waa inaad iska diiwaangeliso degel ku siisa lacag aad ku sameyso sahanno sida halkan ku taal Ebuno. Waxaad ka heli kartaa xitaa bogag badan oo annaga oo kale ah haddaad raadiso " sahanno la bixiyo Inta badan bogaggu waxay leeyihiin habsami iyo hawl fudud oo la isku diiwaangeliyo oo la bilaabo si aad u sameyso sahankaaga ugu horreeya daqiiqado gudahood. boggayaga halkan .